Yoma Car Share Expands to 25 Rental Hubs | Myanmar Business Today
Home Business Local Yoma Car Share Expands to 25 Rental Hubs
Yoma Car Share Expands to 25 Rental Hubs
Tin Mg Oo/Myanmar Business Today
Car rental service Yoma Car Share has expanded to 25 rental hubs across Myanmar with the recent opening of the People’s Park rental hub on Yangon’s U Wisara Road.
“We are creating opportunities for customers to effortlessly have access to various types of vehicles to suit their needs while enriching their lifestyle without needing to ownacar,” said Yoma Car Share’s national sales manager U Set Naung. “Modern engine technology in our new fleet also supports sustainability and reducing carbon emissions,’’
To rent from Yoma Car Share, customers can register and apply for membership via its new mobile application or www.yomacarshare.com. Once membership is approved, customers can reserve and pick upavehicle of their choice from Yoma Car Share.
Currently, small and medium-sized companies and individual users are among the fastest growing categories of Yoma Car Share customers. Offering competitive rental prices and an extensive lineup of vehicles including SUV’s and minivans, Yoma provides flexible solutions to support growing businesses.
Yoma Car Share’s fleet includes Suzuki Swift, Suzuki Ciaz, Suzuki Ertiga, Hyundai H1, Ford Everest and Ford Ranger Double Cab.
Yoma Car Share မှ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အသုံးပြုသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် Rental Hubs ပေါင်း ၂၅ နေရာတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သုံးစွဲသူတွေရဲ့ နေ့စဉ် လူနေမူဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်ကားရှိစရာမလိုပဲ သူတို့ လိုအပ်ချက်ပုံစံအလိုက် အမျိုးမျိုးသော မော်တော်ယာဉ်တွေကို ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ အခွင့်လမ်းသစ်တွေ အားစိုက်ဖန်တီးနေပါတယ်။ ခေတ်သစ် အင်ဂျင်နည်းပညာအရ ကျွန်တော်တို့ ဆီက ကားအသစ်တွေက ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲခြင်းနဲ့ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှှုကို လျှော့ချဖို့အတွက်လည်း ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်” ဟု Yoma Car Share ၏ National Sales Manager ဖြစ်သူ ဦးဆက်နောင်က ပြောသည်။
Yoma Car Share အပလီကေးရှင်းနှင့် ၎င်း၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာwww.yomacarshare.com တွင် register လုပ်ပြီး ကားများကို လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ နာရီအလိုက် ၊ နေ့အလိုက် ၊ ရက်သတ္တပတ်အလိုက် ၊ လအလိုက် စသည်ဖြင့် ငှားရမ်းနိုင်ပြီး ငှားရမ်သူများအနေဖြင့် နီးစပ်ရာ Rental Hubs တွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ သွားရောက်ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် Yoma Car Share ကို ကုမ္ပဏီ အသေးများ အလယ်အလတ်လုပ်ငန်းများနှင့် တစ်ဦးချင်းအသုံးပြုသူများသည် အများဆုံး သုံးစွဲသူ အမျိုးအစားများ ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များနှင့် မန်နေဂျာအများစုသည် အဆင်ပြေသည့် ငှားရမ်းမှှုဈေးနှှုန်းနှင့် SUV’s ၊ Minivans များ အပါအဝင် အခြားသော ရွေးချယ်ရန် ကားအမျိုးအစားများ ရှိခြင်းကြောင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလာကြခြင်းဖြစ်သည်။
Yoma Car Share တွင် Suziki Swift ၊ Suzuki ၊ Ertiga ၊ Suzuki Ciaz ၊ Hyundai H1 ၊ Ford Everest ၊ Ford ၊ Ranger Double Cab အပါအဝင် နောက်ဆုံးပေါ်ကားများကို လိုအပ်ချက်အလိုက် ရွေးချယ်ငှားရမ်းနိုင်ပြီး ဘယ်မောင်းကားများကိုသာ ထားရှိထားကြောင်း သိရသည်။
Previous articleMyanmar Tourism Bank Eyes Lending K20 million to SMEs
Next articleInsurance Licenses Awarded to Foreign, Joint-venture Companies